Tsy dia hoe hisy ireo izay tsy te-hanala kirioliana mamy amin'ny fahavaratra. Ireo bryo ireo dia tsy tsara afa-tsy ny zava-tsoa, ​​fa ilaina ihany koa. Noho izany, ity vanim-potoana ity, ataovy azo antoka fa hampiasa ny fahafahana hihinana kobiry sy ny fanampiany mba hampatanjaka ny fahasalamany alohan'ny fahavaratra sy ny ririnina mangatsiaka.
Safidin'ny cherry mamy
Misy karazany isan-karazany io voankazo io, izay samy hafa amin'ny loko, habe ary tsiro. Na izany aza, azo atao tsara ny milaza hoe: ny mainty dia ilay serizy mamy, ireo zavatra tena mahasoa azy. Ankoatra izany, rehefa mividy, tandremo ny pardonnera - tokony ho maizina sy somary maina, satria manondro ny hafenan'ny cherry mamy izany.
Ny votoatin'ny kaloria sy ny tombontsoa azo avy amin'ny cherry mamy
Ny voankazo mainty dia ahitana vitaminina faran'izay bitika, anisan'izany ny retinoids, ascorbic acid, bioflavonoids, ary vitaminina B. Noho izany, ny fampiasana tsaramaso dia hanampy amin'ny fanatsarana ny maso, ny hoditra ary ny fahasalamana, hanamafy ny sambo sy ny rafi-pitabatabana.
Cherry koa dia manan-karena amin'ny akora mineraly: vy, magnesium, calcium, phosphorus. Noho izany, ireo mpankafy an'io alika marevaka io dia mety tsy hijaly amin'ny anemia, tsy fahombiazany na fandikana ny asan'ny rafi-kady.
Ao anaty cherry maro dia misy fibre, ka vokatr'izany dia miteraka vokatra mora. Noho ny fanadiovana ny tsina dia mihalalina ny mikroflora, ary mihatsara be ny fitsaboana.
Misy vaovao tsara ho an'ireo mitavy. Ny hatsaran-tarehy kalorie dia manify raha oharina amin'ny voankazo hafa na voankazo hafa, heverina ho ambany. Noho izany, eo amin'ny voankazo grama zato dia manodidina ny 52 calories.
Misy tsiranoka manokana, somary maivana ary somary manify bitika dia fotsy fotsy, ny votoatin'ny kalorie izay mitovy amin'izany.
Inoana fa ny kiran'ny mamy dia manana fahafahana hanamaivana ny fanaintainana rehefa tsy mahomby ny aretina mahazatra. Noho izany dia tokony hampiasaina tsy tapaka ny arthritis, gout ary rheomatisma.
Ny voankazo voankazo dia misy zava-manitra manokana - coumarin. Mampihena ny habetsahan'ny ra izy io, mampitombo ny fivoaran'ny tablette atherosclerotic sy ny taratra ra. Amin'io lafiny io, ny serizy dia hahasoa ny zokiolona, ​​ny olona manana loko koloroola avo sy atherosclerose.
Cherry dia tena mahasoa tokoa ho an'ny ankizy sy ny vehivavy bevohoka, satria ny setrin'ny vitamina sy mineraly ao anatiny dia tsara indrindra ho an'ny fambolena.
Mazava ho azy fa manana tsiro mamy mahafinaritra ho an'ny antony ireo voninkazo mamy ireo. Manana glucose sy fructose be dia be izy ireo - "vitamine" vitamina. Etsy ankilany, dia tsy dia misy ao amin'ny kirihitra izy ireo, fa ny tsiron'ity tohotra ity dia mihamangatsiaka kokoa. Noho izany, ny kirihitr'ala vaovao dia mahazo kalorao vao haingana noho ny fisian'ny voamadinika tsotra, izay vetivety dia voatsabo ary milefitra amin'ny endrika tahiry matavy. Eo am-panaovana izany, mitandrema - mihinana tsy tapaka aorian'ny sakafo hariva na amin'ny alina dia misy tsaramaso marevaka tsy mety ho ny fomba tsara indrindra hamelezana ny sarinao. Mihatra amin'ny berries toy ny kerobima mavo izany, satria ny votoatin'ny kalorie dia mitovy amin'ny an'ny mena.
Na izany aza, ny tsy fetezana amin'ny fampiasana ireo bozaka ireo dia tsy mendrika izany. Ny kirokok'i Misochku dia azo omena ho toy ny sakafom-peo na dessert maivana. Hanampy amin'ny fampihenana ny hanoanana izany, satria betsaka ny fibera dia hanome fahatsapana fahanginana mandritra ny fotoana fohy. Ao anatin'io bozaka io dia misy vina-organika vitsivitsy, ka tsy manelingelina ny vavony izy ireo, ary mety ho levona tsy an-kijanona amin'ny olona manana haza-kizo na asidra avo be. Azo ampiasaina ihany koa izy ireo amin'ny fanangonana compotes na zava-pisotro misy voankazo, manomana marokoroko sy sira. Ny voankazo mena dia mety amin'ny mangotraka na ny maina, saingy ny ao anaty kaloria ao amin'ny serfa mamy dia mitoetra ho mitovy ihany - 52 calories ho zato grama. Tsarovy fa rehefa misy fiantraikany amin'ny fari-pahaizana ambany na ambony dia misy vitaminina sy zavatra hafa mahasoa.
Daikon - toetra mahasoa sy fanoherana
Mainty - tombony sy fahasimbana
Misaotra fa ratsy sa ratsy?
Inona no sakafo misy iodine betsaka?
Ahi-kohaka ny fatiantoka
Bulgur - votoaty kalorie
Sakafo mandritra ny 7 andro
15 hevitra momba ny fofona matsiro ho an'ny sakafo maraina, izay mety tsy tsapanao
PA nopotehina sy vohoka
Daty - tombony
Ny sakafo ho an'ny varimbazaha vary amin'ny multifariate
Olivanina ho an'ny vatana
Karatra fitadiavam-bola 30, taorian'ny nahitanao izay, mividy ny zavatra rehetra nambarany
Jay Zee no nitarika ny fanombatombana ireo mpanankarena mpanankarena malaza Forbes
Ny blaogin'ny vehivavy manontolo
Skirt-shorts - iza no mety?
Fanentanana amin'ny fitantanana